Lasekuqaleni LCD wesibuko BlackBerry 8100 / 8120/8130 Pearl — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Lasekuqaleni LCD wesibuko BlackBerry 8100 / 8120/8130 Pearl
isikrini okunjalo isethwe ekuqaleni lapho ukuhlangana ifoni. Ikhwalithi ephezulu. izinguqulo ezahlukahlukene zesikrini: 007/008, 006/4/8.
I-LCD-10294-007 esikrinini original * I-BlackBerry 8100 / 8120/8130 smartphone Pearl — ingxenye ukuthi ubonisa ulwazi. Washayela isibonisi (bonisa), kusukela English "bonisa".
Imininingwane Isikrini 8100/8120/8130 Pearl:
Umbala (inombolo umbala phezu ayizinkulungwane 65)
Diagonal of 2.2 amayintshi
Ukulungiswa 240 × 260 Amaphikseli
Aspect ratio 12:13
I kwabantu of 161 Amaphikseli intshi ngayinye
LCD (okucaciswe luketshezi) — le LCD noma okucaciswe luketshezi flat, esekelwe zinhlayiya ketshezi. LCD TFT (mncane ifilimu Transistor — TFT) — uhlobo okucaciswe luketshezi, esebenzisa i-matrix asebenzayo. Lokhu sikrini ezinhle umbala ukukhiqizwa kanye engeli wokubuka abanzi.
Sicela uqaphele, LCD-10294-007 isikrini * inenguqulo noma uhlobo, efana 007/008, 006/4/8 — ngokuvamile, ayihambisani nomunye, nakuba, futhi ube nemingcele efanayo. Uma ufake inguqulo engasebenzisani ye isibonisi ngemuva kokushintsha kudivayisi uzoboniswa isithombe ezimhlophe ngokuphelele, noma nemithende. Ngakho-ke, uma uhlela ukwenza esikhundleni kwesikrini akuyona enkonzweni yethu isikhungo ngaphambi kokukuthenga ukuthola ukuthi yini version ukubonisa efakwe BlackBerry yakho .
Lena esikhululekile okuyingxenye yokuqala, iskrini enjalo efakwe kule inhlangano yabantwana bakwa-smartphone. Qaphela, emakethe ukusabalala isikrini amakhophi okubonisa ongaphakeme quality Yakha, umbala abampofu, nika umehluko ongaphakeme, isinqumo ongaphakeme, zingabantu lincane yasekuqaleni. Musa skimp esikrinini, ngoba usebenza naye ngaso sonke isikhathi!
Isikrini BlackBerry — esinye sezici ezibalulekile BlackBerry smartphone, futhi, ngeshwa, asikwazi kwalungisa uma amaphutha. Uma kwakho isikrini BlackBerry yokuhlukanisa, noma egcwele uketshezi, noma nje "yenkinga" kanye nemibukiso ezinemibala zezinja noma isithombe ezimhlophe, kuphela kungenzeka isixazululo — esikhundleni LCD screen. Olunye ulwazi ungafunda ekhasini Ukubuyiselwa LCD Screen.
Lasekuqaleni LCD wesibuko BlackBerry 8100 / 8120/8130 Pearl, Ngaphandle umbala, thayipha 005 8100LCD-005/008 (LCD-10294-005/008) ●
Lasekuqaleni LCD wesibuko BlackBerry 8100 / 8120/8130 Pearl, Ngaphandle umbala, thayipha 007 8100LCD-007/008 (LCD-10294-007/008) ●
Lasekuqaleni LCD wesibuko BlackBerry 8100 / 8120/8130 Pearl, Ngaphandle umbala, thayipha 006 8100LCD-006/4/8 (LCD-10294-006/4/8) ●
Ngaphandle umbala, thayipha 005 8100LCD-005/008 (LCD-10294-005/008)
Ngaphandle umbala, thayipha 007 8100LCD-007/008 (LCD-10294-007/008)
Ngaphandle umbala, thayipha 006 8100LCD-006/4/8 (LCD-10294-006/4/8)